အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – မတ်လ ၂၀၁၇ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – မတ်လ ၂၀၁၇
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – မတ်လ ၂၀၁၇
Posted by kai on Mar 7, 2017 in Editor's Notes, Myanmar Gazette, News | 22 comments
မစ္စတာ အိုဘားမားတစ်ယောက်ကော… အခု ဘာတွေ လုပ်နေလဲ…
လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးလေး လုပ်ပြီး အေးအေးလူလူ နေချင်ပြီလို့ကော… ပြောသေးလား။
စီအိုင်အေမှာ.. ကမ္ဘာပေါ်မှာသုံးနေသမျှ ဖုံး၊ တီဗီ ကွန်ပျူတာတွေကို ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ နည်းပညာရှိနေပြီး.. အဲဒီနည်းပညာဟာ..စီအိုင်အေကနေ ခိုးယူခံရလို့ မသမာသူတွေလက်ထဲကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း..။
by Jose Pagliery @Jose_Pagliery March 7, 2017: 3:58 PM ET
မြန်မာအရက်သမား.. အသောက်နိုင်ဆုံး.. တဲ့..။
ANGON, March4— Japanese brewer Kirin is hoping to tap into swift growth — and serious staying power — with its latest investment in Myanmar’s fizzing beer market,asenior executive said yesterday.
Last month the beer giant tookacontrolling stake in Mandalay Brewery for US$4.3 million (RM19.15 million), topping off its more than halfabillion investment in top producer Myanmar Brewery in 2015.
In the long-run, he said Myanmar’s drinkers can also knock it back for longer than their regional counterparts.
“Myanmar people are very, very strong for alcohol,” he told AFP.
“We haveakit to measure resistance to drink… They are much stronger than Japanese and Chinese.”
– See more at: http://www.themalaymailonline.com/eat-drink/article/japanese-brewer-kirin-targets-myanmars-hardy-drinkers#sthash.qD78Tek5.dpuf
ယုန် ဒယ် ယုန် ဒယ်
“သတိထားဖွယ် ငရဲအနံ့ သင်းနေသော အလှူများ”
အလှူဒါနပြုခြင်းသည် ကုသိုလ်ရရန်ဖြစ်၏။ အလှူပွဲ၌ ကြက်၊ ဝက်၊ နွားများကို သတ်၍ ကျွေးမွေးခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်တစ်ပဲ ငရဲတစ်ပိဿသာ ဖြစ်ရ၏။
အလှူရှင်သည် ပင့်သံဃာ၊ ဖိတ်ထားသော ပရိသတ်အတွက် လောက်လောက်ငင ဖြစ်စေရန် ကြက်က ဘယ်နှစ်ကောင်၊ ဝက်က ဘယ်နှစ်ကောင် သတ်၍ ကျွေးရမည်ဟု စိတ်ကိုဖြစ်စေ၏။
မလှူမီကပင် မနောကံအကုသိုလ်များ ဖြစ်နေသည်။ တစ်ဖန် အလှူပွဲရောက်သောအခါ သတ္တဝါများကို မိမိကိုယ်တိုင် မသတ်စေကာမူ သင့်တော်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို သတ်ရန် ပြောဆိုစေခိုင်းရပြန်သည်။ ထိုအခါ ဝစီကံ အကုသိုလ်က ဖြစ်ရပြန်သည်။
တစ်ဖန်ဟင်းလျာများ ရရှိရေးအတွက် ရှေးဦးစွာ ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရ၏။ ကြက်၊ ဝက် ရနိုင်သည့်နေရာသို့ သွားရ၏။
အရောင်းအဝယ်ကိစ္စဆောင်ရွတ်ရ၏။ တန်ဖိုးကိုပေးချေရ၏။ ထိုအခါ ကာယကံအကုသိုလ် ဖြစ်တော့၏။
အလှူရှင်သည် ကောင်းမှုပြုမည်ဟု နှလုံးသွင်းကာ မကောင်းမှုကို ပြုဘိ၏။ ကုသိုလ်ပြုအံ့ဟူ၍ အကုသိုလ်ကို ပြုနေ၏။ သုဂတိလမ်းကြောင်းကို ရှာမည်ဟုကြံစည်လျှက် ဒုဂ္ဂတိလမ်းကြောင်းကို ရှာမှီးနေဘိ၏။
မှတ်ချက်။ ။ ၂၀၁၂ ဩဂုတ်လထုတ် မေတ္တာရှင်မဂ္ဂဇင်းပါ ဦးငွေသန်း၏ ငရဲနံ့သင်းနေသော အလှူများ ဆောင်းပါးကို လေးအိမ်စု အရှင်ဝိစိတ္တသာရ၏ စကားလက်ဆောင် တရားလက်ဆောင်(၅) မှထုတ်နှုတ်ဖော်ပြသည်။
တစ်ဆက်တည်း အပါယ်ရောက်ကြောင်း ကိုယ်တိုင်ရေးဆောင်းပါးကိုလည်း အားလုံးအတွက် ထပ်ဆင့် မျှဝေလိုက်ပါ၏။
“သတိထားဖွယ် မပေးလှူကောင်းသော အလှူ(၁၀)မျိုး”
ပေးကမ်းလှူဒါန်းမှုပြုသော်လည်း ဒါနဟု မခေါ်ရ။ အဒါနဟုသာ ခေါ်ရသည့် ပေးကမ်းမှု(၁၀)မျိုးကို မိလိန္ဒပဥှာပါဠိတော် (ဝေဿန္တရပဥှာ) ၌ ဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။
၁။ မူးယစ်စေတတ်သော သေရည်သေရက် စသောအရာများကို ပေးလှူခြင်း= မဇ္ဇဒါန။
၃။ မေထုန်မှီဝဲမှုပြုရန် အမ-သတ္တဝါများကိုပေးလှူခြင်း= ဣတ္ထိဒါန
၅။ ကာမဂုဏ်စိတ်ကို ထကြွပွားများစေတတ်သော ပန်းချီကား အရုပ်စသည်ကို ပေးလှူခြင်း= စိတ္တကမ္မဒါန။
၉။ သတ်ဖြတ်စားသောက်ရန် ကြက် ဝက် စသသည်ကို ပေးလှူခြင်း= ကုက္ကုဋသူကရဒါန။
၁၀။ မမှန်ကန်သော ချိန်ခွင်-အလေး တင်းတောင်းကြိုး စသည်ကိုပေးလှူခြင်း= တုလာကူဋဒါနတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအလှူ(၁၀)မျိုးတို့တွင် တစ်မျိုးမျိုးကို ပေးလှူလျှင် ဒါနကုသိုလ် မဖြစ်သည့်အပြင် အကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွား၍ အပါယ်သို့ပင် ကျရောက်နိုင်ကြောင်း မိလိန္ဒပဥှာပါဠိတော်၌ ဟောကြားတော်မူထား၏။
ဝိနည်းငါးကျမ်းတွင် တစ်ကျမ်းအဖြစ်ပါဝင်သော ပရိဝါပါဠိတော်၌လည်း “လူ့လောကတွင် မကောင်းမှုအကုသိုလ်သာ ဖြစ်ပါလျက် လူမိုက်များက ကုသိုလ်ဟု ခေါ်ဝေါ်နေကြသည့် အလှူတို့မှာ ငါးမျိုးရှိ၏။
(၁)။ သေရည် သေရက် အလှူဟူသော မဇ္ဇဒါန၊
(၂)။ သဘင်အလှူဟူသော သမဇ္ဇဒါန၊
(၃)၊ မိန်းမအလှူဟူသော ဣတ္ထိဒါန၊
(၄)။ နွားလားဥသဘအလှူဟူသော ဥသဘဒါန၊
(၅)။ ကိလေသာပွားကြောင်း ပန်းချီဆေးရေးရုပ် အလှူဟူသော စိတ္တကမ္မဒါနတို့ ဖြစ်၏” ဟု ဟော်ကြားထား၏။
“သူတစ်ပါးတို့ သောက်စားရန် လှူသော ယစ်မျိုးအလှူ၊ သူတစ်ပါးတို့ ကြည့်ရှုပျော်ပါးစေရန်လှူသော ပွဲသဘင်အလှူ၊ အမျိုးသားများ မေထုန်မှီဝဲရန် လှူသော မိန်းမအလှူ၊ နွားမကို သန္ဓေရအောင် လှူသော နွားလားဥသဘအလှူ၊ ကိလေသာပွားရန် ရေးဆွဲထုလုပ်ထားသော ပန်းချီဆေးရေးရုပ်ဟူသော အလှူငါးမျိုးတို့မှာ တဏှာရာဂ ပွားကြောင်း အစစ်ဧကန်ဖြစ်သောကြောင့် ကုသိုလ်မဖြစ်၊ အကုသိုလ်ဖြစ်သော အလှူတို့သာဖြစ်၏။” ဟု ပရိဝါအဋ္ဌကထာ၌ မိန့်ဆိုထား၏။
သို့ရာတွင် ဝိနည်းမဟာဝါပါဠိတော်၌ ရဟန်းတော်တို့အား အရက်ကို လိမ်းကျံရသော နယ်ဆီအဖြစ် အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသောကြောင့် အရက်သောက်သုံးရန် မဟုတ်ဘဲ လိမ်းဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရန် လှူကောင်း၏။
လှူလျှင်ကုသိုလ်ဖြစ်၏။ အမျိုးသမီးတို့အား အရာမ်စောင့်အဖြစ် အလှူခံခွင့်ပြုထားသော ကြောင့် အမျိုးသမီးများကို အရာမ်စောင့်အတွက် လှူကောင်း၏။ လှူလျှင် ကုသိုလ်ဖြစ်၏။ နွားလား ဥဿဘကို သေနာသနအလို့ငှာ ကျောင်းအား လှူဒါန်းကောင်း၏။ လှူလျှင်ကုသိုလ်ဖြစ်၏။ ပရိဝါအဌကထာ၌ “ဇရပ် တန်ဆောင်း၊ ဂူ၊ ကျောင်း၊ ပြဿဒ်၊ မဏ္ဍပ် စသည်တို့၌ ငရဲခန်း၊ ဘုံခန်း၊ တောထွက်ခန်း၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ရေးထုခြင်းကို ပြုခြင်းငှာအပ်၏” ဟု မိန့်ဆိုထားသောကြောင့် ကိလေသာစိတ်များ မဖြစ်ပွားစေတတ်သည့် ပန်းချီကား၊ ပန်းပုရုပ်တို့ကို ပေးလှူကောင်း၏။ လှူလျှင်ကုသိုလ်ဖြစ်၏။
ထို့ပြင် အဆင်းလှပသော မိန်းမယောက်ျားတို့သည် ရူပဒါနဖြစ်စေရန် အကြည့်ရှုခံ၍ အဆင်းကိုလှူအံ့၊ သဒ္ဒဒါနဖြစ်စေရန် သီချင်းသီဆို၍ အသံကို လှူအံ့၊ ဂန္ဓဒါနဖြစ်စေရန် အနမ်းအရှုခံ၍ အနံ့ကို လှူအံ့။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗဒါနဖြစ်စေရန် အမွေ့အပိုက်ကိုခံ၍ အတွေ့ကိုလှူအံ့။ ဤအလုံးစုံသည် ကုသိုလ်မဖြစ်၊ အကုသိုလ်သာဖြစ်သည်။ ကုသိုလ်ဇောမစော၊ အမိုက်ဇော၊ အမှားဇောတွေသာ စောသည်။ အမိုက်ဇော ဆိုသည်မှာ မောဟဇော၊ အမှားဇောဆိုသည်မှာ ဒိဋ္ဌိဇောကို ဆိုသည်။ “ဖလေပါဋိကင်္ခ ိတွာ” ဟု ဒက္ခိဏဝိဘင်္ဂသုတ် အဋ္ဌကထာဆိုသောကြောင့် ကုသိုလ်လို၍ ပေးမှ ဒါနဆိုရသည်။ “ချစ်ပေး၊ ကြိုက်ပေး၊ ကြောက်ပေး(လာဘ်မျှော်ပေး) စသည်တို့ကို ဒါနမဆိုရ၊”ဟု တတိယရွှေကျင်သာသနာပိုင် ဒီပဲယင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးက ပရမတ္ထစက္ခု ကျမ်း၌ မိန့်ဆိုထား၏။
တိပိဋကဓရ မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်း “ကြည်လင်စင်ကြယ်သော သဒ္ဓါတရားဖြင့်ပေးခြင်း မဟုတ်ဘဲ ချစ်ကြိုက်၍ ပေးခြင်း၊ စိတ်ဆိုး၍ပေးခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့၍ပေးခြင်း၊၊ မိုက်မဲတွေဝေ၍ပေးခြင်းမှ စ၍ပေးခြင်း ဟူသမျှကို လောက၌ ပြုကျင့်ကြမြဲ ဝတ္ထရားအတိုင်း ပေးခြင်းမျိုးဖြစ်၍ ဒါနပါရမီနှင့် မသက်ဆိုင်” ဟု ဒါနမမည်သော ပေးခြင်းမျိုးကို မိန့်ဆိုထားပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ အထက်ပါ ဒါနမမည်သော အလှူဒါနများအား မပြုလုပ်မိ၊ မလှူမိစေရန် သတိထားသင့်ပါကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါသည်။
စာဖတ်သူအားလုံး သက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒများတစ်လုံးတစ်ဝတည်းပြည့်ဝကြပါစေ။
အာ့ဆို မလှူဘဲ နေတာက အပြစ်ပိုကင်းလိမ့်မယ်။ ခေတ်သစ်အမြင်အရဆိုလည်း မလှူတာ မှန်တယ်။ ဘာလို့ဆို အလှူအတမ်း အများဆုံး တိုင်းပြည်ဟာ အမွဲတတ်ဆုံး တိုင်းပြည်ပဲတဲ့။ ဘီလ်ဂိတ်တို့လိုမျိုး တစ်ကမာ္ဘလုံးကို လှူနေတာမျုးိ တော့ ချွင်းချက် ထားရမှာပေါ့နော်။
ဒီနှစ်တော့ အထူးအစီစဉ် အနေနဲ့ ၁ဝ ရက် အပြည့် နားကြဘာဒဲ့
သမ္မတ ရုံးက ပြောဒါ
“Add Media” နဲ့ပုံတွေတင်ဘို့အခက်အခဲရှိပါတယ်၊
“Add Media” ကိုကြေးဇူးွပုွပွီးကညျ့ပေးပါရနျ
ဒီနေရာမှာ နှစ်ခါထပ်တာကို အမှားပြင်ဘို့ “Edit” လဲမတွေ့ရပါ
တရုတ်သဘုုံ ကြေးမုံဂျီးအား ရွာပြင်ထုတ်ကြ
By CHOE SANG-HUNMARCH 20, 2017
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရုံး ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး Martin Andanar ဦးဆောင်ပြီး Selfie ဆွဲ
Credit: Min Thein Tun FB
မြစ်ဆုံ # ၃၉ ကိုဝင်လို့မရပါ။
ရရင်တော့ okay ပါ၊
password နဲ့ဝင်တဲ့အခါ ကိုယ့်draft စာကျမ်း ရာသူများစာကျမ်း
ခါတိုင်းလို ကိုယ့်စာကျမ်း draft နဲ့ကိုယ်ဘဲသပ်သပ်စီထားရင်
၃၉ ဆိုတာ.. XXXIX ဆိုရင် ရှာမတွေ့ပါ…။
သူများDraft တွေနဲ့ ကိုယ့် Draft နဲ့ခွဲထားပါ။ User Rank မြှင့်လိုက်လို့ အခုလိုမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်..။
Tue Mar 21, 2017 | 11:23pm EDT
MAR 31 2017, 7:28 PM ET
Breakthrough made in fight against blood cancer
KOB 4-Mar 31, 2017
“These are patients who are absolutely not responding to standard of care chemotherapies,” says Dr. Frederick Locke of Moffitt Cancer Center.
New Gene Therapy for Cancer Offers Hope to Those With No …
NBCNews.com-Mar 31, 2017
လက်တင်ဘာသာနက် ရေးတဲ့စာတင်ပါ အူးမာမွတ်၊ အင်္ဂုလိလို ဖက်တပ်ဗူး။